Shariif: Waxaan u baahanahay isbeddel - BBC News Somali
Shariif: Waxaan u baahanahay isbeddel
15 Sebtembar 2010
Image caption Madaxweyne Shariif iyo Raiisul Wasaare Sharmarke
Madaxweynaha KMG ah ee Soomaaliya, Shariif Shiikh Axmed, oo maanta la hadlayay mudanayaasha baarlamaanka ayaa ugu baaqay in isbeddel lagu sameeyo xukuumadda loo baahan yahay.
Madaxweynaha ayaa sheegay in dhawr jeer isku shaandheyn lagu sameeyay xukuumadda waxna ay qaban weysay, haatana loo baahan yahay in isbeddel daruuri ah.
Shariif Shiikh Axmed ayaa qirtay in xukuumaddu ay ku guul dareysatay inay wax ka qabato ammaanka dalka.
Madaxweynuhu waxa uu ka hadlay dastuurka qabyada ah ee la doonayo in Soomaaliya loo sameeyo, oo uu ku tilmaamay mid aan sharci ku dhisneyn, sababtoo ah buu yiri ma ahan mid baarlamaanka la hor keenay ama dikreeto Madaxweyne lagu soo saaray
Kullanka baarlamaanka maanta oo uu shir guddoominayay, ku xigeenka guddoomiyaha baarlamaanka ayaa waxa la horkeenay mooshin ka dhan ah xukuumadda Raiisul wasaare Cumar Cabdirashiid, kaasi oo ay ku saxiixnaayeen 110 xildhibaan.
Fadhiga baarlamaanka maanta ayaa waxaa sidoo kale laga hor akhriyay warqad qoraal ah oo uu oo diray Raiisul Wasaaraha, taasi oo uu ku sheegay in xukuumaddiisu aanay waajib ku ahayn xilligan inay kalsooni weydiisato baarlamaanka.